7 manomano ekusunungura nzvimbo pane iyo iPhone, unoziva here ese? | IPhone nhau
Apple yakagara ichizivikanwa ne kusabvumidza vashandisi kuwedzera nzvimbo yekuchengetera emidziyo yavo vachishandisa memori makadhi, iyo inomanikidza vashandisi kutenga mamodheru ane hukuru hwekuchengetera kana kubata iyo nzvimbo yakafanana nekutarisira kukuru uye kuigadzirisa iyo kusvika pakakwirira. Vanhu vazhinji vakatsamwa kuti Apple haina kuburitsa iyo 32GB modhi semuenzaniso wepasi uye vazhinji vashandisi vasina mukana wekutora iyo 64GB modhi vaifanira kutenga iyo 16GB modhi. Kune vese avo vashandisi vane iPhone ine diki yekuchengetera nzvimbo, muActualidad iPhone tinokuratidza matipi akati wandei ekugona kusunungura nzvimbo yakashandiswa zvisina basa nedhidhi yedu, kuitira kuti ushandise zvirinani ndangariro.
1 PhoneExpander kusunungura nzvimbo pane iPhone
2 Bvisa cache cache
3 Usashandise vatengi vema mail senge Mail
4 Delete maapplication atisingashandise
5 Dzima iyo auto-savha sarudzo muWhatsApp
6 Bvisa iyo pikicha uye vhidhiyo reel
7 Kutamba mimhanzi
PhoneExpander kusunungura nzvimbo pane iPhone
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kujekeswa kuti MufananidzoExpander inofanira kushandiswa pamwe chete neMAC, hachisi chikumbiro cheIOS. Basa guru rekushandisa uku kutiratidza saizi inotorwa nezvose zvimisikidzo zvatakaisa pane yedu kifaa uye kutipa mukana wekuzvibvisa zvakananga.
Bvisa cache cache
Nekufamba kwenguva, kunyorera kuri kuchengetedza mifananidzo kuti ikurumidze kurodha nguva kuburikidza nechishandiso, asi zvishoma nezvishoma, nzvimbo iyi inogona kuve yakakura uye inotora chikamu chikuru chedu chakakosha nzvimbo yekuchengetera. Nekuti bvisa iyo iPhone cache yezvishandiso senge Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Teregiramu… Tinogona kushandisa iyo CacheClearer tweak inowanikwa muRyan Petrich's repo http://rpetri.ch/repo.
Kana tangoiswa, tinoenda kuGeneral> Shandisa> Zvishandiso uye isu tichawana zvingasarudzwa zvitatu uko tisati tangowana sarudzo Bvisa application. Iye zvino tinogona zvakare dzosera chishandiso kunzvimbo yepakutanga, sekunge tiri kuisazve, kana kudurura cache zvachosekudzima dhata rese rayo.
Usashandise vatengi vema mail senge Mail
Chinyorwa cheMail chinoramba chiripo, kunyangwe nemabasa matsva aakatambira neIOS 8, zvakaringana uye pane dzakawanda nguva zvinokanganisa isu tese tinoshandisa zvakanyanya chikumbiro. Tsamba dzinowanzo dhawunirodha tsamba dzemeseji kuchinhu ichi, iine nzvimbo yese inosanganisirwa. Pandakanga ndashandisa yemuno tsamba yekushandisa muIOS, Meseji, ini ndakawana kuve neinenge 1 GB yakabatikana pane yangu kifaa kungoita tsamba chete.
Sarudzo yakanakisa yekugona kunzvenga kuti chishandiso chedu chizere nemaemail atakatoona uye hatifanirwe kubvunzazve zvekare munguva pfupi. iyo yakanakira sarudzo ndeye kushandisa zvemuno tsamba kunyorera, senge Gmail, Tsamba, Yahoo kana Outlook.
Delete maapplication atisingashandise
Nguva zhinji isu tinoisa mafomu kungoona mashandiro avo, chimwe chinhu chatagara tichiita nekombuta yedu, asi mune ino kesi, isu tinofanirwa kuziva kuti nzvimbo yechigadzirwa chedu inogumira pasina mukana wekuwedzera.
Dzima iyo auto-savha sarudzo muWhatsApp
Imwe sarudzo ye yakasununguka nzvimbo pane iyo iPhone Inoitwa nekumisa sarudzo yekuchengetedza mapikicha muWhatsApp kana mamwe mameseji vatengi.
Nokusingaperi, pese patinogamuchira Chero chero mufananidzo kana vhidhiyo kuburikidza neWhatsApp zvinobva zvachengetedzwa kune reel. Iyi sarudzo inokwanisa kuzadza zvese reel uye chishandiso nemafaira nemavhidhiyo atisingazoone zvakare. Kuti tiite kuti isabatika, tinoenda kuZvirongwa> Nhaurirano dzeChats uye uncheck iyo Auto-savha mafaera sarudzo. Kana isu tichida kusevha chero mufananidzo kana vhidhiyo, isu tinongofanirwa kumanikidza pane iyo faira iri kubvunzwa kusvikira menyu yaonekwa apo iyo inotipa isu sarudzo yekuchengetedza pane izvo zvinodzedzerera. MuTeregiramu, nekumisikidza isu hatina iro dambudziko nekuti sarudzo iyoyo yadzimwa.
Bvisa iyo pikicha uye vhidhiyo reel
Ose mapikicha uye mavhidhiyo atinotora zuva rega rega anotora nzvimbo yakakosha pane yedu kifaa uye nekufamba kwenguva inogona kuva mutoro pane iripo nzvimbo yemudziyo wedu. Zvinokurudzirwa mwedzi wega-wega kurodha pasi mifananidzo kumakomputa edu uye kuidzima kubva pachigadzirwa Parizvino akawanda makore ekuchengetedza masevhisi akadai seOneDrive anotipa mukana wekungoisa wega mapikicha kune iro gore, iro rinotibvumidza, kana isu tisingade kugadzira kopi pakombuta, vadzime kubva pachigadzirwa zvakananga nguva nenguva.
Usati waita iyi nhanho ita shuwa kuti mifananidzo yese yakaiswa nenzira kwayo. Ramba uchifunga kuti masevhisi aya anotanga kuisa iwo mafoto akachengetwa pane reel kana iko kunyorera kwave kuiswa uye mvumo inoenderana yakapihwa. Mifananidzo yese nemavhidhiyo atakatora kusvika parizvino hazvingarongedzwe otomatiki, izvo zvinotimanikidza kuzviita neruoko.
Kana iwe uri mumwe wevashandisi avo vanowanzo teerera kumimhanzi pane yako iPhone uye uri vashandisi veSpotify, sarudzo yakanakisa ndeyekuterera mimhanzi kuburikidza neshumiro iyi, sezvo isingatore nzvimbo. Uye zvakare, nesarudzo yekurodha pasi, zuva rega rega iwe unogona kurodha mimhanzi yaunofarira zvakanyanya, uchifunga kuti mimhanzi yakadhawunirodwa yekutamba pamhepo inotora nzvimbo pane yedu kifaa asi zviri nyore kwazvo kuidzima kuti utore zvimwe , nekuti hazvidi kuti ubatanidze kune komputa kuti uwedzere zvimwe.
Ndeapi madhiri aunoshandisa ku sununguka nzvimbo pane iPhone kana iPad? Pasina kupokana, chimwe chezvinyanyo kuonekera ndechekubvisa cache yezvikumbiro uye kune zvimwe izvo, kunyangwe ivo vachigara nemamegabytes mashoma, nekufamba kwenguva vanopedzisira vachidya mukati mekuchengetedza kwetemu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungasunungura sei nzvimbo pane yangu iPhone
Jay akarara akadaro
Kuikanda iyo hahahahaha ios 8 yakwanisa kundibata kuti ndibvise paapuro. Enda njodzi
Pindura kuna Jay Lay
Parallax Arthur akadaro
Kana iwe usingazive kuishandisa, huya kwaari shamwari, iwe uchaona matambudziko e l5.1
Pindura Parallax Arthur
Sezvo ini ndachinjira kune nex6 ine 5.1, zero matambudziko. Zvese chaizvo nekukurumidza pasina kurodha nguva kana kudhonza. Yakakurudzirwa.
Iyo kambani inoburitsa Nexus 5 uye rinongova gore gare gare inomira kugadzira uye kuitengesa, hausi iwo muenzaniso wakanakisa kurwisa Apple 😊
Soylent Green akadaro
Apple haina kuita zvakafanana neiyo iPhone 5 uye yechitatu-chizvarwa iPad?
Pindura kuna Soylent Green
Keiron dombo akadaro
Ndinoziva vanhu vazhinji vane 16 GB iPhone iyo inotora inenge hafu kana kupfuura mumimhanzi nemifananidzo nemavhidhiyo ... Mhinduro iri nyore ndiyo yakapusa: shandisa makore akaita seDropbox (rinova RINONYANYA) uye bvisa ese awakakanda ipapo kubva pane reel (unogona kugara uchidzirodha pasi kana kutumira chinongedzo paunenge uchichida) uye pamimhanzi zvakanaka kwazvo kubvisa izvo zvausingachateerere (ndabva pane nziyo gumi nembiri kusvika makumi matatu nemaviri uye ikozvino ndine nzvimbo yakawanda ) uye kana iwe zvakare uine Spotify Premium zvirinani pane zvirinani. Chimwe chinhu chandinokurudzira kubvisa mapurogiramu uye kurodha pasi zvakare (yega yega inogadziridza inoita kuti app iwedzere uye nekudaro unowana nzvimbo). Pane yangu 124 GB iPhone 32S ini ndichine 5 yasara yekuzadza
Pindura Keiron Stonem
Mhoro!! Ini ndinogona kutaura newe kuti unditungamire pane iyo inodonhedza nyaya? Ndine kusagadzikana kwekuchengetera ne8 gb yemaphotos nemaapplication .. asi handina kukwanisa kuisa whatsapp. Ndatenda!
Ehe saizvozvo: 3 asi iri nyore kwazvo uye iyo imwecheteyo app inotozvitsanangura zviri nyore kwazvo: 3 kunyanya kune iyo iwe yaunopa mukana wekutora mifananidzo kune iyo dropbox app kana iine wifi inotanga kukutumira iwo mafoto uye kana ivo vatovepo iwe unogona kuvabvisa kubva pane reel. Kubva pakombuta tora iyo app woisa iyo account imwechete. Kuti utore zvinhu kubva kuDeopbox chinonyanya kugovera bhatani uye kurodha pasi.
Chinhu chakanakisa kuita kuvhura account yeMicrosoft OneDrive (inopa yakawanda nzvimbo kupfuura Dropbox) uye isa iyo application. Kekutanga nguva yaunovhura application, inokumbira mvumo yako kuti ugoisa wega mapikicha aunotora kubva panguva iyoyo otomatiki kuenda kune gore kana iwe uine Wi-Fi network. Maitiro acho ari nyore. Ndinovimba ndakabatsira.
Julian Torres akadaro
Pane chero munhu anoziva kusunungura nzvimbo iyo iMessage app inoshandisa, ini ndadzima meseji dzangu uye zvakangodzikira zvishoma?
Pindura Julian Torres
Miguel Hapasisina akadaro
Ne jailbreak iwe unogona
Pindura Miguel Sin Mas
Mhoro! Anogona here CacheClearer app kungoshandiswa chete kana iphone yangu yakasungwa?
Mhinduro yezvese izvi iDoctor Mudziyo, application yakanaka kwazvo, ini parizvino ndinoshandisa iPhone 6 ine IOS 8.4.1 uye inojekesa cache yese yekushandisa iyo inotora nzvimbo yakakosha nekufamba kwenguva.
Izvo nenzira iri mune yemahara uye yakabhadharwa App Store,
Pindura kuna Anthony
Papirin lopez akadaro
Sunungura kumusoro nzvimbo pane iPhones 4s
uye 6. Ndiri kusiya mari mumaapplication, iro gore, Mumhanzi nezvimwe.
Iri ibhizimusi hombe kumakambani
asi kwete kune anonyorera, ane
kubhadhara zvese, Internet, nharembozha,
Iro gore, zvimwe zvinoshandiswa, Iwo mimhanzi
Kutanga ivo havana kunditendera kuendesa yangu
mumhanzi kubva ku4s kusvika ku6 nekuti kana vari
nusucas dzangu uye ndakavabhadhara zvakanyanya
zviso kumamwe makambani, hongu kana ivo
Ini ndinotenga kubva kuApple, saka hongu… Hazvina kunaka.
Pindura kuna Papirin Lopez
Jose Samanez akadaro
mukushandisa ini ndine 9.9 ... ivo vakapa kudzikisa izvi asi ini ndichiri kuzviona
Pindura kuna jose samanez
Alejandra Garcia akadaro
NDINGADZIDZA SEI MUPENYU WE "VAMWE"? NDINE 6 GB uye HANDI KUZIVA KUTI CHII?
Pindura kuna Alejandra García
Juan Mera akadaro
Ini ndashandisa iyo tweak cache cleaner uye ndadzorera 3 GB pasina kudzima pikicha kana kunyorera. Ikurudziro yakanaka kwazvo.
Pindura Juan Mera
Apple inonatsa maVPN maapplication kuChina
Iyo Apple Watch yatove ne jailbreak, kunyangwe ichave isiri yeruzhinji